‘सेना आए हात मिलाइन्छ’– नेत्रविक्रम चन्द (सचिव, नेकपा–माओवादी) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०८:२१ English
‘सेना आए हात मिलाइन्छ’– नेत्रविक्रम चन्द (सचिव, नेकपा–माओवादी)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा–माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्द हार्डलाइनर नेताको रूपमा परिचित छन् । पार्टीको रणनीतिकारमध्ये एक मानिने चन्द प्रस्ट वक्ता छन्, बौद्धिक बहस गर्न रुचाउँछन् । पछिल्लो समयमा चीनले विश्वास गरेको व्यक्तित्वको रूपमा पनि उनलाई लिइन्छ । चीन भ्रमणपछि घटना र विचार साप्ताहिकसंगको कुराकानी :
० तपाईंको पार्टीभित्र मङ्सिर ४ को चुनावमा जाने र नजाने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद रहेछ नि, किन यस्तो ?
– हाम्रो पार्टीमा चुनावमा जाने या नजाने भन्ने कुनै विवाद छैन । हाम्रो पार्टीले त यथास्थितिमा चुनावमा नजाने, बहिष्कार गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेकै छ त ।
० तपाईंको पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ले त चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ नि ?
– खै ! मलाई पत्यार लागेन उहाँले कतै त्यस्तो कुरा गर्नुभयो होला भनेर । बादलजीले नै हो रत्नपार्कमा साङ्केतिक मतपेटिका फुटाएर चुनाव बहिष्कारको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको ।
० तर, उहाँले त चुनावको विकल्प छैन भन्नुभएको छ नि ?
– हामीसँग (पार्टीमा) त भन्नुभएको छैन, तपाईंहरूसँग भनेको भए त्यसको प्रमाण पनि त होला नि । वास्तवमा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म चुनावमा जानुपर्छ भनेर मत प्रस्ताव गरेका छैनन् । पोखरा बैठकबाट सर्वसहमत निर्णय भएको हो चुनावमा नजाने, बहिष्कार गर्ने भनेर । सहमति भयो भने मात्र जाने हो, अन्यथा चुनावमा जाने कुरा आजका दिनसम्म कुनै नेताले गरेका छैनन् ।
० बादल, पम्पा भुसालगायतका नेताबाट निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ भनिन्छ नि तपाईंको पार्टीभित्र ?
– छैन–छैन । यो सब बेतुकका हल्ला हुन् । हामी सब पार्टीको निर्णयप्रति एकढिक्का वा एकमत छौँ । मङ्सिर ४ को चुनाव बहिष्कारकै मार्गमा हामी गइरहेका छौँ । यो चुनाव निरङ्कुशताको प्रतीक हो, यो लोकतन्त्र र शान्तिका विरुद्धमा छ, त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपले असफल पार्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी एकमत छ । आजको नेपालमा यही तरिकाले गरिने चुनावको औचित्य छैन भन्नेमा हामीभित्र मात्र एकमत रहेको नभई काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीभित्र पनि यस्तो आवाज उठिरहेको अवस्था छ । चुनावको विकल्प छैन भन्ने यी पार्टीभित्र त यस्तो आवाज उठेको छ भने हाम्रो पार्टीले त जन्मँदैमा यस्तो संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधानसभामाथि खेलबाड गरिएकैले त हामीले पार्टी नै पुनर्गठन गर्नुपरेको हो ।
० हिजो पार्टी बैठकबाट जनविद्रोहमा जाने भनी गरेको निर्णय त विवादमै प-यो नि होइन ?
– छैन–छैन, परेको छैन । देशमा यत्रो बेथिति छ, यत्रो असन्तुष्टि छ जनतामा, अनि विद्रोहको कुरा कसरी विवादमा पर्छ ? विद्रोह भनेको के हो र ? जनताले राज्यबाट आधारभूत कुरा पनि नपाउँदा त्यसमा असन्तुष्टि जनाउनु, सुनुवाइ भएन भने अलिक चर्को आवाजमा कराउनु र अझै सुनुवाइ नभए आन्दोलनको शक्ति प्रयोग गर्नु नै त हो विद्रोह भनेको । यस्तो विषयमा कसरी विवाद हुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र ? सरकारी मिडियाले नै चुनावी सर्भेक्षण गरेका हामी देखिरहेका छौँ, त्यसमा एकजना नेपालीले पनि चुनाव हुन्छ भनेर किटानी गर्न सकेका छैनन् । बरु यस्तो तालले खै के चुनाव होला र ? भन्दै निराशा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सहमतिबाट संविधान बनाए हुन्छ, यत्रो खर्च गरिरहनै पर्दैन भन्ने जनभावनाअनुसारकै हाम्रो पनि धारणा हो ।
० जनता त संविधानसभा निर्वाचनकै पक्षमा छन् नि, किन बुझ पचाउनुहुन्छ तपाईंहरू ?
– जनता यस्तो चुनावको पक्षमा छँदै छैनन् भन्ने म दाबीका साथ दोहो-याउन चाहन्छु । हेर्नुस्, यो चुनावमा एक खर्ब खर्च हुँदै छ । औपचारिक रूपमै १६ अर्ब खर्च हुने बताइएको छ भने यहाँ खर्ब खर्च हुनेवाला छ । राज्यको यत्रो रकम किन खर्च गर्ने ? बेकारमा नेपाली जनताले यत्रो ऋणको भार किन बोक्ने ?
० सरकार त चुनावको तयारीमा जुटिसक्यो नि ?
– सरकारको इच्छा पनि चुनाव गराउने छैन । मसँग पनि खिलराज रेग्मीको कुरा भएको छ । उहाँले पनि सहमतिमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । माधवजी र सुशीलजीहरूको दबाब छ भन्नुहुन्छ तर कसको दबाब हो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला । उहाँहरू माओवादीबिनाको निर्वाचन हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ ।
० तपाईहरूबिना पनि चुनाव भयो भने नि ?
– त्यो सम्भव छैन, असफल हुन्छ । जनता सहभागी नभएको, जनता सन्तुष्ट नभएको र शान्ति प्रक्रियाको जो मुख्य पक्ष हो त्यो सहभागी नभएको चुनाव हुनै सक्दैन । शान्तिसम्झौतामा माओवादी र प्रजातन्त्रवादी मिलेर राज्य चलाउने भनेको छ । माओवादी नै बाहिर रहेपछि गरिने चुनाव केको लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । तपाईंहरूले प्रचण्ड र बाबुरामजी छन् भन्नुहोला, उहाँहरू त माओवादी नै होइन । त्यो उहाँहरूले आफैँ स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अहिले आन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्टाउन संविधानसभाको निर्वाचन भनिँदै छ ।
० चुनाव रोक्ने तागत छ तपाईहरूसँग ?
– छ, त्यसको प्रमुख सूत्र भनेको जनता नै हो । युवा बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान र कानुन व्यवसायीहरू सबै अहिले विपक्षमा छन्, यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन । यो नै हाम्रो बहिष्कारको मुख्य आधार हो ।
० सेना परिचालन गरेर चुनाव गरियो भने ?
– सेना परिचालन गरेर चुनाव हुनै सक्दैन । के नेपाली सेना काङ्ग्रेसको हो ? कि प्रचण्डजीको पेवा हो ? नेपाली सेना त राष्ट्रको हो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कुनै पनि सरकारले आमसहमतिबिना सेना परिचालन गर्न सक्दैन । यदि सेना प्रयोग भए त्यो प्रेम गरेर हत्या गरेजस्तो हुन्छ । सेना परिचालन भए हामी सेनासँग हात मिलाएर हिँड्छौँ । म जनरलहरूलाई अपिल गर्छु परिचालन नहुनलाई । हाम्रो सेना प्रहरीसँग सहकार्य हुन सक्छ । उनीहरूले पनि हाम्रो कुरा बुझेका छन् । त्यसैले हामीविरुद्ध परिचालन हुने कुरा हुँदैन । तर, हामी फुटेको अवस्था छ भनेर पेल्ने नीति लिइयो भने हतियार रातारात आउन सक्छ ।
० चीनले हतियार दिन्छु भनेको छ ?
– म पटक–पटक चीन भ्रमणमा जानुको अर्थ यो लगाउनु हुँदैन । चीन हतियारको खानी होइन । मलाई अरूसँग होइन, नेपाली जनतासँग विश्वास छ । हतियार लिन चीन जान पर्दैन । चीनले निर्वाचनको विषयमा पनि केही भनेको छैन । उनीहरू अहस्तक्षेपको नीतिमा छन् । चुनाव नेपाली नागरिकको कुरा हो, नेपाली जनताले जे चाहन्छन् त्यसको पक्षमा हामी छौँ भनेर चीनले स्पष्ट भनेको छ ।
० गोलमेच सम्मेलनको सहमति भएको थियो, कुरा कसरी बिग्रियो ?
– सबैले भनेकै हो, तर म पनि अचम्मित छु । बच्चा जन्मेको खुसियाली मनाउन नपाउँदै मलामी जानुपर्ने अवस्थाजस्तै भो । यसमा नेपालका नेताहरूको विवेक प्रयोग भएको छैन । सहमति भएर गोलमेचमा जान खुसी हुनुभएको थियो, तर दुई दिनपछि हुँदैन भन्नुभयो । त्यसको कारण कि उहाँहरूले गोलमेच नै बुझ्नुभएको थिएन किचाहिँ जहाँबाट अनुमति लिनुपर्ने थियो अनुमति नलिई गरेकोले पछि झपार खाएपछि फिर्ता लिएको हुनुपर्छ ।
२६ भाद्र २०७०, बुधबार २१:१० मा प्रकाशित